Pc ကွန်ပျူတာသို့ပြန်သွားရန်ဖုံးထုတ်လုပ်ခြင်း China Manufacturers & Suppliers & Factory
Pc ကွန်ပျူတာသို့ပြန်သွားရန်ဖုံးထုတ်လုပ်ခြင်း - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 8 များအတွက်စုစုပေါင်း Pc ကွန်ပျူတာသို့ပြန်သွားရန်ဖုံးထုတ်လုပ်ခြင်း ထုတ်ကုန်များ)
အီလက်ထရောနစ်ကုန်ပစ္စည်းနောက်ဖုံး Injection ကိုမှို
အဆိုပါ Injection ကိုမှိုထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်နိုင်အောင်ပေါ်အာကာသ, မော်တော်ကား, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, ကိရိယာ, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, ဆေးထိုးတန်ဆာထုတ်ကုန်နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အသုံးပြုကြသည်။ ဘက်ထရီနောက်ကျောကို ABS ထုတ်လုပ်မှိုခိုင်မာတဲ့တည်ငြိမ်မှု, မြင့်သောမျက်နှာပြင်တောက်ပြောင်, ကောင်းသောအပူခုခံရှိပါတယ်ဖုံးလွှမ်း။ PC...
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Notebook PC ကိုရှဲလ်
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်း Notebook PC ကို shell ကိုသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း, Semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်း mode ကိုသုံးပြီးထက်ပို 0.3mm မှထုတ်ကုန်တိကျစီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသူ့ဟာသူစက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့၏မြင့်မားသောတိရှိပါတယ်, ထုတ်ကုန်ပိုကောင်းပေါ့ပါးပစ်မှတ်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်။...
PC ကွန်ပျူတာပစ္စည်း Injection ကိုပလတ်စတစ်
ထုပ်ပိုး: OPP Bag နှင့်ပုံး Box ကို
၏ပုံမှန် applications များ PC ကွန်ပျူတာပစ္စည်းစိတ်တိုင်းကျ Injection ကိုမှို: လျှပ်စစ်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ (ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများ, connectors, etc), ကရိယာ (စသည်တို့ကိုအစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့စက်တွေ, ရေခဲသေတ္တာအံဆွဲ,), (စသည်တို့ကိုမော်တော်ယာဉ်ရှေ့နှင့်နောက်မီးလုံး, တူရိယာပြား,)...
မဂ္ဂနီစီယမ် PC အတွက်အခြေစိုက်စခန်းပြားဝင်း Casting Die
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းဖြစ်စဉ်ကို ချ. သေဆုံး, မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏တည်ငြိမ်မှုကို High-ဖိအား Cast ၏ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်နှင့်စက်တိကျမှန်ကန်မှုကိုမြင့်မားသောတိနှင့်အတူမြင့်နိုင်သည့်, မြင့်မားသည်။ ကောင်းသောသေဆုံးစွမ်းဆောင်ရည် ချ. နှင့်တကွ, သေ Cast ၏အထူ 0.3mm ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါမဂ္ဂနီစီယမ် PC...
PC အတွက် Touch ကို Keyboard ကို Casting semi Solid သေ
semi-အစိုင်အခဲသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းကမ်ဘာပျေါမှာသစ်ကိုသတ္တုဖွဲ့စည်းနည်းပညာအရာ, တိုတောင်းဘို့ SSC ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါမဂ္ဂနီဆီယမ်အလင်းအလွိုင်းပစ္စည်းထုတ်ကုန်မြင့်မားတဲ့သိပ်သည်းဆမြင့်မားတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ / မာကျောမှု, မြင့်မားသောတိ, ဒဏ်ငွေမျက်နှာပြင်, ချေးခုခံမရှိညစ်ညမ်းမှု ......
မဂ္ဂနီစီယမ်အလွိုင်းမဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်အခြားဒြပ်စင်၏ရေးစပ်ထားတဲ့အလွိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်တွေ့ကျတဲ့သတ္တုများအတွက်အပေါ့ပါးဆုံးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်၏တိကျသောဆွဲငင်အားအကြောင်းကို 2/3 လူမီနီယမ်နှင့်သံ၏ 1/4 ဖြစ်ပါတယ်။...
high-quality အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန် panel ကိုညွှန်ပြချက်အလင်းနှင့်အတူ panel ကို၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်တယ်, တိကျစွာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တိကျစွာပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။ Polycarbonate အများအပြားမျိုးကို PC များ၏ချို့ယွင်းချက်တိုးတက်စေရာ (PC ကို) PC ကိုသတ္တုစပ်, ထဲမှာပါတဲ့ (process)...
PC ကွန်ပျူတာပစ္စည်းမော်တော်ယာဉ် Precision အစိတ်အပိုင်းများ